Jiangxi Sanjia Farshaxanka Hadiyadda Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2018, iyada ka horreeyay, Koonmei Farsamooyinka Alaabada waxaa lagu aasaasay 2005 Shenzhen. Warshadeenu hada waxay daboolaysaa dhul dhan 4,000+ mitir murabac ah. U dhow Poyang Lake oo ah harada biyo-macaan ee ugu weyn Shiinaha, warshaddeena waxay ku raaxeysaneysaa gaadiid ku habboon iyo jawi qurux badan. Anagoo ah soo saare khibrad hodan ku ah warshadaha farsamada gacanta & hadiyadaha, waxaan diirada saareynaa soo saarida alaabooyin qaas ah oo ay ka mid yihiin biinanka dhaldhalaalka, biinanka laabta, calaamadda iyo astaamaha, keychains, bilado, qadaadiic, astaamaha eyga, calaamadaha, iwm.
Iyada oo silsilad warshadeed oo dhammaystiran, waxaan ku bixin karnaa adeeg hal-ku-habboon oo hal-joogsi ah oo si madax-bannaan u dhammaystiraya geedi socodka wax soo saarka oo dhan farshaxanka dhijitaalka ah, barnaamijyada, wax-u-sameynta, dhimista-shaatiga, shaabadaynta, nadiifinta, ranjiyeynta, dahaadhka, isu-imaatinka QC iyo xirxirida Tani waxay na siineysaa faa iido weyn oo aan ku bixinayno maaraynta qiimaha saxda ah iyo xakamaynta tayada macaamiisha leh meeleynta suuqa kala duwan.
Dhanka kale, waxaan ku guuleysanay shahaadooyinka ISO9001 iyo TUV. Inta badan shaqaalaheena xirfadleyda ah waxay khibrad u leeyihiin in ka badan 10 sano arimahan waxayna si weyn wax ugu biiriyaan shirkadeena bixinta adeeg xirfadeed iyo alaab qancisa macaamiishayada qaaliga ah dal iyo dibadba.
Sababtoo ah waxaan nahay:
- Alaab-Hubiyaha Alibaba;
- ISO iyo TUV Factory Certified;
- Si buuxda loogu qalabeeyay Adeegga Macaamiisha ee Hal-joogsi ah;
- Iskiis u yeelashada qolka dahaadhka - midabyo kala duwan oo dahaadh ah ayaa la heli karaa;
- Midabaynta Mashiinnada Waaweyn ee Ugu Dambeeya, Oo Siinaya Karti Sare;
- Caddeymo farshaxan oo bilaash ah iyo dib u habeynno;
- Muunado qaas ah oo bilaash ah, oo aan ku jirin caaryada iyo rarka;
- Bixinta Kormeerka-waqtiga dhabta ah ee Sawirka ama Video Kahor Shixnad;
- Shaqaalaha Xirfadlayaasha ah Had iyo Jeer Waa Laga Helaa Khadka Tooska ah ee loogu Adeegto.
Baahidaadu waa hadafkeena, qanacsanaantaadu waa baacsigeena, guushaadu waa mida ugu weyn ee aan ku faraxsanahay!
Ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto wakhti kasta si aad ugala hadasho mashruucaagas.